Ahoana No Manomboka Mahazo Nahalala Ny Zazavavy Fianakaviana sy ny Fifandraisana
Matetika izany no mitranga fa ny lehilahy nahita ny tovovavy fa izy tia. Te-handeha, mba hahafantatra azy, fa toy ny hoe mihazona ny zavatra iray. Eto sy henatra (indrindra raha saro-kenatra, dia nisalasala hilaza amin’ny natiora), sy ny tahotra dia toa tactless, intrusive. Ary ny tahotra ny fandavana, indrindra, tamin’ny feo maneso, echidnas, koa mijanona. Iza no tahaka izany raha toa ka manao vazivazy. Fa tsarovy: na inona na inona sahy, nahazo na inona na inona. Raha toa ka ny fivoriana natao ny fety amin’ny namana na olom-pantatra, izay matetika maimaim-poana, tony rivotra — izany no tsotra ity raharaha ity.
Ny fomba tsara indrindra mba tia fotsiny no tsy misy. Ary catty fandavana anao tena azo antoka. Na manao kajy, misy ny namana mahafantatra izany, ary mangataka anao mba hametraka ny samy hafa. Na mihaino ny zavatra ambarany fa ny hafa, miezaka ny sary an-tsaina ny faribolana ny zavatra mahaliana, ary solafaka miresaka amin’ny mitovy foto-kevitra.
Raha ny fivoriana natao tao amin’ny trano fisotroana na kafe — ny dia azo atao ny manao izany, tahaka ny ho an’ny Amerikana. Tonga ho azy, ary niteny hoe: ‘Hi.
Ny anarako dia Vasa’
Ho azo antoka ny tsiky tamim-panajana sy unobtrusively. Amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra, ny ankizivavy iray, fara fahakeliny, mba hanaraka ny fitsipiky ny mahalala fomba valiny fiarahabana. Ary izany dia midika hoe fifandraisana notontosaina. Dia izany rehetra izany dia miankina aminao. Mahita ny arabe noho ny antony samihafa sarotra kokoa. Fa ihany koa, ny tena tena. Ny zava-dehibe indrindra — hiezaka ny hahatakatra ny zavatra karazana fihetseham-po ny zazavavy. Raha izany dia mazava zavatra tezitra, na miasa saina, dia tsy tsara ny vivery izany. Toy izany koa — amin’ny maha-izy faingana. Raha tsy izany, dia afaka tamim-panajana anontanio azy izay misy ny akaiky indrindra. Ny faobe ny safidy: trano famakiam-boky, ny filan-kevitry ny distrika, ny toeram-pitsaboana nify, levitra, — pitsaboana biby, sns. Bebe kokoa, arakaraka ny valiny, asa raha ilaina. Raha toa ka mitondra ny mazava ho azy fa mavesatra kitapo, dia afaka manolotra mba hanampy azy — ny akaiky indrindra metro na ny fiara fitateram-bahoaka intsony, ohatra. Ny zava-dehibe indrindra — tsy miezaka ny ho toy izany, raha ny toetra amam-panahy Arcady Voaloboka, izay no: ‘Tsara, dia aoka ahy eto. Aho Fanampiana ‘sy amin-kitsimpo dia gaga ianao: mba hitondra zavatra baovao, ary aiza ny vehivavy handeha. Farany, aoka ho herim-po (na ny fiavonavonana, fantatrao tsara kokoa), ary blurted avy: ‘ny Zazavavy. Ianao no tena tsara tarehy, ka mahafatifaty. Tena te-hihaona aminao. ‘Izany no azo atao fa ny asa
← Chat - adala - poana Tokana ny Fiaraha-monina ny amin'ny Chat, Hihaona sy manadala ankizilahy. Videochat
No Lehibe Indrindra Maimaim-Poana Ny Mampiaraka Toerana →